Manchester United Oo Qaadaysa Tallaabadii Ay Paul Pogba Kaga Xakamayn Lahayd Real Madrid Iyo Doorka Hoggaamineed Ee La Siinayo - Cadalool.com
Manchester United Oo Qaadaysa Tallaabadii Ay Paul Pogba Kaga Xakamayn Lahayd Real Madrid Iyo Doorka Hoggaamineed Ee La Siinayo
Manchester United ayaa go’aansatay inay Paul Pogba siiso door hoggaamineed oo uu ku dareemo inuu muhiim ka yahay kooxdiisa, si loogu qanciyo inuu sii joogo.
Pogba oo lala xidhiidhinayo Real Madrid, ayaaa waxa Solskjaer uu doonayaa inuu dib ugu soo celiyo masuuliyaddii kabtanimada ee uu ka xayuubiyey Jose Mourinho markii ay isku dhaceen qaybtii hore ee xili ciyaareedkan dhamaadka ah.
United ayaa wax walba u samaynaysa sidii ay u xajisan lahayd xiddigeedan labada gool u dhaliyey ciyaartii xalay, waxaana wargeyska Sunday Mirror Sport uu ku warramay in wax walba oo dhaca aanay Red Devils iibin doonin, ayna doonayaan inay usoo bandhigaan qandaraas cusub oo muddo dheer ku haynaya Old Trafford.
Kabtanka rasmiga ah ee Manchester United ee waqtigan oo ah Antonio Valencia oo dhaawac muddo dheer ah ku maqan ayaa la filayaa in dhamaadka xili ciyaareedka uu iska tago, halka ku-xigeenkiisa oo ah Ashley Young isagana uu ku jiro dhamaadka cimrigiisa xirfadeed.
Marka ay labadan ciyaartoy ka baxaan, Pogba ayaa si buuxda u noqon doona tababaraha sida ay wararku sheegayaan, waxaana ku-xigeenno u noqon doona David de Gea iyo Chris Smalling.
Tababare Solskjaer ayaa ku qanacsan in Pogba uu leeyahay haybad hoggaamineed, uuna dareemo culayska saaran marka uu xidhan yahay calaamadda kabtanka, taas oo qayb ka noqon karta qorshaha ay doonayaan inay kaga hayaan Real Madrid oo bartilmaameed ka dhiganaysa marka uu suuqu furmo.